ရီးယဲလ်မှာ ကစားဖို့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ ဖြစ်မလာခဲ့သူများ
11 Oct 2018 . 11:10 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ချယ်လ်ဆီးတောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard ဟာ ရီးယဲလ်မှာ ကစားခွင့်ရဖို့က သူ့ငယ်ဘ၀ အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ဟ၀န်ခံခဲ့တယ်။ ဟာဇက်မတိုင်ခင် ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ကစားဖို့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ခဲ့တဲ့ Star Players တွေ အများကြီးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဲဒီကစားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ တချို့ကစားသမားတွေကတော့ ဘာနေဗျူးမြေကို ခြေချဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် ရီးယဲလ်မှာ ကစားဖို့အိပ်မက်ကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ဖြစ်မလာတဲ့ နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေကို စပိန် နာမည်ကျော် Marca အားကစားသတင်းစာက အခုလိုပဲ ဖော်ပြခဲ့တယ် . . .
အူဘာမီယန်း Aubameyang – “ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ။ ရီးယဲလ်မှာ ကစားခွင့်ရစေရမယ်လို့ ကျွန်တော့်အဖိုးကို ကတိပေးခဲ့ပြီးသားပါ။ တစ်နေ့နေ့ကျရင် အဲဒီ အိပ်မက်က အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” (၂၀၁၆ မှာ ပြောကြားခဲ့)
ဖယ်လ်ကာအို Falcao – ”ကျွန်တော့်သားရဲ့ အိပ်မက်က မက်ဒရစ်မှာ ကစားခွင့်ရဖို့ပါပဲ။ သူ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရီးယဲလ်မှာ ကစားခွင့်ရဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တာပါ” (၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖယ်လ်ကာအိုရဲ့ ဖခင် ပြောကြားခဲ့)
မားကွက်ဇ် Marquez – ”မက်ဒရစ်မှာ ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ဘောလုံးသမားတိုင်းက ရီးယဲလ်မှာ ကစားချင်ကြသူတွေပါပဲ” (၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ပြောကြားခဲ့)
ထရက်ဇီဂေး Trezequet – ”ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ကစားခွင့်ရဖို့က ဘောလုံးသမားတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ပါ” (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ပြောကြားခဲ့)
ရောဘတ်ပီရက်စ် Robert Pires -”ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်ကတော့ တစ်နေနေ့ကျရင် ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ကစားခွင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အဲဒီရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားမှာပါ” (၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ပြောကြား)
လူကာကူ Lukaku -”ကျွန်တော့် အိပ်မက်က မက်ဒရစ်မှာ ကစားခွင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်ဟာ ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ” (၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ပြောကြားခဲ့)
လူးကပ်စ်မော်ရာ Lucas Moura – ”တစ်နေ့နေ့ကျရင် ရီးယဲလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ ကျွန်တော့် ငယ်ဘ၀ အိပ်မက်ပါ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်” (၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပြောကြားခဲ့)
ဒီကစားသမားတွေထဲက တချို့က ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ဘဲ တချို့ကစားသမားတွေကတော့ အခုအချိန်အထိ ကျင်လည်နေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီဘောလုံးသမားတွေထဲက ဘယ်သူတွေဟာ သူတို့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလဲဆိုတာ . . .
ရီးယဲလျမှာ ကစားဖို့ စိတျကူးအိပျမကျခဲ့ပမေယျ့ လကျတှေ့ ဖွဈမလာခဲ့သူမြား
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ခယျြလျဆီးတောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Hazard ဟာ ရီးယဲလျမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့က သူ့ငယျဘ၀ အိပျမကျဖွဈပါတယျဆိုပွီး ဖှငျ့ဟဝနျခံခဲ့တယျ။ ဟာဇကျမတိုငျခငျ ရီးယဲလျအသငျးမှာ ကစားဖို့ စိတျကူးအိပျမကျခဲ့တဲ့ Star Players တှေ အမြားကွီးရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ အဲဒီကစားသမားတှဟော သူတို့ရဲ့ အိပျမကျကို အကောငျအထညျ မဖျောနိုငျခဲ့ကွပါဘူး။ တခြို့ကစားသမားတှကေတော့ ဘာနဗြေူးမွကေို ခွခေဖြို့အတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနဆေဲပါ။ ဒါကွောငျ့ ရီးယဲလျမှာ ကစားဖို့အိပျမကျကို ဖှငျ့ဟဝနျခံခဲ့ပမေယျ့ လကျတှဖွေ့ဈမလာတဲ့ နာမညျကွီး ကစားသမားတှကေို စပိနျ နာမညျကြျော Marca အားကစားသတငျးစာက အခုလိုပဲ ဖျောပွခဲ့တယျ . . .
အူဘာမီယနျး Aubameyang – “ရီးယဲလျအသငျးဟာ ကြှနျတေျာ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမွဲရှိနတေဲ့ အသငျးတဈသငျးပါ။ ရီးယဲလျမှာ ကစားခှငျ့ရစရေမယျလို့ ကြှနျတေျာ့အဖိုးကို ကတိပေးခဲ့ပွီးသားပါ။ တဈနနေ့ကေ့ရြငျ အဲဒီ အိပျမကျက အကောငျအထညျပျေါလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ” (၂၀၁၆ မှာ ပွောကွားခဲ့)
ဖယျလျကာအို Falcao – ”ကြှနျတေျာ့သားရဲ့ အိပျမကျက မကျဒရဈမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ပါပဲ။ သူ ငယျငယျလေးကတညျးက ရီးယဲလျမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ ဆန်ဒရှိခဲ့တာပါ” (၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ ဖယျလျကာအိုရဲ့ ဖခငျ ပွောကွားခဲ့)
မားကှကျဇျ Marquez – ”မကျဒရဈမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ဆိုတာက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အိပျမကျတဈခုပါ။ ဘောလုံးသမားတိုငျးက ရီးယဲလျမှာ ကစားခငျြကွသူတှပေါပဲ” (၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ ပွောကွားခဲ့)
ထရကျဇီဂေး Trezequet – ”ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အင်ျကြီကို ဝတျဆငျကစားခှငျ့ရဖို့က ဘောလုံးသမားတိုငျးရဲ့ အိပျမကျပါ” (၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ပွောကွားခဲ့)
ရောဘတျပီရကျဈ Robert Pires -”ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အိပျမကျကတော့ တဈနနေကေ့ရြငျ ရီးယဲလျအသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ဖွဈပါတယျ။ အခု အဲဒီရညျမှနျးခကျြကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ ကြှနျတျော ကွိုးစားမှာပါ” (၂၀၀၀ ခုနှဈမှာ ပွောကွား)
လူကာကူ Lukaku -”ကြှနျတေျာ့ အိပျမကျက မကျဒရဈမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျဟာ ကွီးကယျြခနျးနားတဲ့ အသငျးတဈသငျးပါ” (၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ ပွောကွားခဲ့)
လူးကပျဈမျောရာ Lucas Moura – ”တဈနနေ့ကေ့ရြငျ ရီးယဲလျအသငျးကို ပွောငျးရှကေ့စားဖို့ ကြှနျတေျာ့ ငယျဘ၀ အိပျမကျပါ။ သူတို့ဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး အသငျးတှထေဲက တဈသငျးဖွဈပါတယျ” (၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ ပွောကွားခဲ့)
ဒီကစားသမားတှထေဲက တခြို့က ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ဘဲ တခြို့ကစားသမားတှကေတော့ အခုအခြိနျအထိ ကငျြလညျနဆေဲပါ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီဘောလုံးသမားတှထေဲက ဘယျသူတှဟော သူတို့ အိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမလဲဆိုတာ . . .